Okpu okpu na okpu agha wear Ihe eji achọ ọrụ • ihe eji arụ ọrụ kọmputa P&M
Atskpụ na uru bụ akụkụ nke akụrụngwa BHP chọrọ n'ebe ọrụ enwekwu ihe ize ndụ. Ha bụ nchebe ndụ na ahụike.
Ngwaahịa dị na pm.com.pl na-ebute site n'aka ndị na-emepụta aha ọma. A dịgasị iche iche na-enye gị ohere ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị maka ọrụ ahụ. Anyị na-eme ka ọgaranya anyị na-enweta na ngwaahịa ọhụrụ.
Onyinye anyị anyị gbasaa na balaclavas bara uru karịsịa n'oge oyi, ịchafụ anwụrụ ọkụ, okpu siri nri, ọta ihu, ntupu mkpuchi maka ụlọ ọrụ nri na ndị ọzọ. N'ihi nkwado mgbe niile na ndị na-emepụta ihe na nnukwu iwu, anyị na-enwe ike ịnye ọnụahịa mara mma na nhọrọ dị iche iche, na mgbakwunye ego maka ndị ahịa oge niile.
Okpu okpu agha, okpu agha
Okpu agha maka nkasi obi na nchekwa
Okpu agha enwere ike ime mgbanwe maka mkpa gị ka ha nwere ihe ndozi na-enye gị ohere ịgbanwe ha na mkpa gị. Flexibilitydị mgbanwe okpu agha a na-atụgharị bụrụ nkasi obi na nchekwa.
Igwe okpu na-adịghị mma, n'oge mmetụta, dịka site n'elu, nwere ike ịdata ngwa ngwa, na-ekpughe isi na nnukwu mmerụ ahụ. Anyị na-enye ọtụtụ ụdị agba dị iche iche. Ihe eji eme okpu agha na-eguzogide mmetụta na-adịghị mma nke ihe ndị dị na mpụga, ọ nweghịkwa ogige ndị na-egbu egbu iji mee ha.
Okpu nchebe maka oge ọ bụla
N’ime ụlọ ahịa anyị, anyị na-enye uwe siri ike ma dịkwa mma ị ga-eyi okpu nchebe na ọkpụrụkpụ dị iche iche dabara maka oge dị iche iche. N'oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị, anyị na-akwado mkpuchi ọkụ nke na-echebe nke ọma na ụzarị anyanwụ.
N'oge oyi, ọkachasị na oke oyi, okpu a kpuchitere zuru oke ka ha na-ekpuchi okpomọkụ nke isi. Anyị na-akwado ha ka ha kachasị mma nye ndị na-arụ ọrụ n'èzí n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe siri ike. Anyị nwere ụdị ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ịhọrọ, nke na-akwado nhọpụta nke ngwaahịa.
Maka ndị na-achọ okpu mkpuchi na-acha ọkụ ọkụ nke yiri okpu nwere visor, anyị nwere nhọrọ nke ụdị ndị nrụpụta JSP na REIS.
Ya mere ìhè okpu agha nye nchebe zuru oke megide mmetụta megide ihe siri ike. N'etiti enwere ntinye nke HDPE ma ọ bụ ABS plastik nwere sistemu absorption, na-agbakwunye ihe maka nkasi obi kawanye.
Atskpụ ha nwere oghere ikuku, eriri ndozi, na akpa dị n'ime na-enye gị ohere iwepu ihe siri ike, si otú a na-enye gị ohere ịsacha okpu ma ọ bụ gosi akara ihe mkpuchi kọmputa.
Okpu agha na-enye ọkụ, nke ejiri akwa chọọ mma
Reis okpu okpu
ọrụ ọchaokpu ọrụọrụ okpu na visorokpu ọrụ oge oyiokpu baseballụmụ nwoke oge oyi okpuoge ọrụ okpuokpu okpu aghaisi nchekwa okpu aghaokpu ọrụagba ọrụ okpuokpu ọrụ olxuvex okpu agha